UPDATE: Sheekada Aan Laheyn ee United Airlines ee Riyooyinka COVID-19 ayaa sii socota
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » UPDATE: Sheekada Aan Laheyn ee United Airlines ee Riyooyinka COVID-19 ayaa sii socota
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
50 rakaab ah oo ka duulay duulimaadkii United Airlines 3742 ee ka yimid Chicago kuna socday Milwaukee, oo ay maamusho Air Wisconsin, ayaa Isniintii shaki geli doona haddii ay qandaraas ku qaataan COVID-19. Duulimaadkan ayay ahayd inaan marna loo oggolaan inuu baxo, tanna waxaa xaqiijiyay mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda iyo kabtanka inay tahay mid aan ammaan ahayn.
FAA ayaa la xiriirtay eTurboNews oo qirtay arrinta.
FAA ayaa sheegtay eTurboNews labaduba waxay burbureen Nidaamkii Hawada (Air Conditioning Systems) waxayna ahayd wax aan caadi ahayn in diyaaradda ay raacdo rakaab, laakiin aan sharci ahayn
FAAQday eTurboNews in loofole laga yaabo in la ogaaday sheekadan awgeed. Maxaa hagaagsan waqtiyada aan faafa ahayn, waxaa laga yaabaa inaanay ammaan ahayn inta uu jiro aafadu. Cusboonaysiin kale ayaa soo bixi doonta
Diyaarad rakaab oo ay lahayd United Airline oo ah halka sifeynta hawada loo damiyay cilad darteed ayaa loo oggolaaday inay duusho.
Arrintan ayaa la ogaa kahor intaanay duulin oo la iska indho tiray.
United Airlines UA 3742 laga bilaabo Chicago ilaa Milwaukee Oktoobar 4.
Scott Kirby, Maamulaha guud ee United Airlines, wuxuu yiri Luulyo 2020: “Waan ognahay in deegaanka diyaaraddu ammaan tahay, maxaa yeelay socodka hawada waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo gudbinta cudurrada, marka hore waxaan sare u qaadeynaa hawo -qaadista nidaamka sifeynta HEPA, taas oo u fiican shaqaalahayaga iyo macaamiisheena. Tayada hawada, oo ay weheliso siyaasad adag oo maaskaro ah iyo meelaha si joogto ah jeermiska looga sifeeyo, ayaa ah aasaaska looga hortago faafitaanka COVID-19 ee diyaaradda. ”
Waa wax laga naxo in la arko in isla shirkaddii duulimaadku ay iska indho tirtay waxa maamulaheeda ku ammaanay inay tahay sida kaliya ee ay si ammaan ah ugu hawlgalaan shirkadaha diyaaradaha inta lagu jiro aafada.
Dayactirka United Airlines ee Chicago wuxuu ku dhiirri -galiyay kabtanka duulaya UA 3742 inuu iska baxo isagoo og in nidaamka shaandhaynta hawada aan loo adeegsan karin duulimaadkan gaaban ee Milwaukee. Cudurdaarka: Dayactirka Air Wisconsin wuxuu ku yaal Milwaukee - waligaa ha ka fikirin rakaabka.
UA 3742 waxaa maamula shirkadda duulimaadyada ee saldhigeedu yahay Milwaukee Air Wisconsin, iyadoo adeegsanaysa CL 65, oo u muuqata inay tahay diyaarad CRJ 200. Canadair CL 65 waa diyaarad 50 kursi ah oo ay dhistay Quebec, Bombardier oo fadhigeedu yahay Canada, intii u dhaxaysay 1992 ilaa 2006.
Goorma eTurboNews oo loogu yeero Bombardier taageero farsamo, daabacaadan waxaa loo sheegay in diyaaradu ay aad u da 'weyn tahay inay lahaato taageerada onlinka ee hadda.
Thanks to shaandheeyeyaal hawo-wax-ku-ool ah oo heer sare ah oo isbitaal ah (HEPA), inta ugu badan ee walxaha (oo ay ku jiraan jeermiska iyo dhibcaha neef -mareenka fayruuska) ayaa laga saaraa hawo -hawleedka dayuuradaha casriga ah waqtiyo joogto ah marka la dhex -wareegayo oo lagu beddelo hawo nadiif ah. Tani waxay ka dhacdaa dhammaan diyaaradaha ka weyn inta badan 50-kursi ee gobollada gobolka in kasta oo qaar ka mid ah shirkadaha duullimaadyada ay maal-gelinayaan farsamaynta sifeynta HEPA ee diyaaradahaas hadda, sidoo kale.
Waa maxay wax iska cad, haddii aysan jirin wareegga hawada gabi ahaanba duulimaadka rakaabka, tani waxay halis gelin doontaa rakaabka iyo shaqaalaha saaran inay qaadaan jeermisyada, sida COVID-19. eTurboNews wuxuu la xiriiray qareenka duulista Lee ee New York, iyo VJ P, oo hore u ahaan jiray ku -xigeenka Etihad Airways si loo xaqiijiyo tan.
Waxaa lagugula talinayaa inaad 6 fiit ka fogaato rakaabka xiga, taas oo dabcan aan suurtogal ahayn diyaarad kasta oo ganacsi, gaar ahaan diyaarad rakaab oo si buuxda loo buuxiyey, sida UA 3742 Oktoobar 4.
Iyada oo aan lahayn fogeyn bulsheed, sifeynta hawo habboon ayaa laga yaabaa inay tahay waxa kaliya ee dhex istaagi kara rakaabka iyo fayraska.
UA 3742 oo ka hawlgasha Chicago O'Hare ilaa Milwaukee Oktoobar 4, shaqaalaha dhulka ee United Airlines ayaa ku dhawaaqay aagga diyaaradda, in laga yaabo inay xoogaa diirimaad ku yeelato diyaaradda maadaama qaboojiyaha uusan hagaajin. Meelna laguma sharxin in gebi ahaanba nidaamka hawo -mareenku uu baxay, iyo in ay dadka rakaabka ah iyo shaqaalahaba u nuglaan doonto inay qaadaan cudurka coronavirus ama cudurro kale oo hawada ku dhaca.
UA 3742 ayaa tagsi ku samaysay dhabaha diyaaraduhu ku ordaan ee Chicago, heerkulka gudahana awalba aad buu u kululaaday, inta badan rakaabku waxay bilaabeen dhidid, qaar kalena waxay bilaabeen qufac.
Nidaamka wareegga hawada waligiis ma imaan, laakiin si layaab leh, shaqaalaha diyaaradda ayaa si kibir leh u sharxay nidaamka nadiifinta ee United Airlines.
Markii si gaar ah loo waydiiyey, isla hawlwadeenkii diyaaradda ayaa u sheegay eTurboNews in ay ka baqday in ay ku jirto duulimaadkaas oo loo ballanqaaday duulimaadkii hore in nidaamka hawo -qabadka lagu qaban doono Chicago. Waxay sheegtay inay si cagajiid ah u oggolaatay inay sii waddo Milwaukee, oo iyaduna ahayd gurigeeda, iyadoo raacisay inaysan ku laaban doonin shaqada si ay mar kale ugu duusho diyaaradan.
eTurboNews si isdaba joog ah u gaadhay United Airlines iyo Air Wisconsin si ay u helaan caddayn ku saabsan haddii shaandhaynta noocaas ah loo adeegsaday duulimaadkan. Ma jiro wax jawaab ah oo ka soo baxay midkoodna.
Sida muuqata Chicago, oo ah xarunta UA, dayactirka United Airlines ma aysan doonayn inay wax ka qabato arrinta waxayna soo jeedisay duulimaadka Milwaukee si uu u shaqeeyo, si diyaaradda loogu dayactiro Milwaukee, oo ah saldhigga Air Wisconsin.
eTurboNews la hadlay duuliyihii ka dib markii uu soo degay oo weydiiyey haddii ay ammaan tahay in la hawlgeliyo duulimaad buuxa oo leh hab hawo oo xumaaday inta lagu jiro aafada. Duuliyihii ayaa qirtay eTurboNews may ahayn, wuuna ka cudur daartay.
Rakaab kale ayaa sheegay inuu ahaa kabtan howlgab ah wuxuuna ka xumaaday in kabtanka Air Wisconsin uu maamulo diyaaradan.
eTurboNews marar badan waxay la xiriirtay United Airlines si ay u ogaato haddii rakaabkii saarnaa diyaaradan la raad raaci karo, laakiin mar labaad wax jawaab ah lagama helin.
eTurboNews sidoo kale wuxuu la xiriiray United Airlines isagoo weydiistay sharraxaad. Xiriirka warbaahinta ayaa u sheegay eTurboNews, ma jirin wax shil ah oo loo galay duulimaadkan.
Adeegga macmiilka UA wuxuu yiri, tani wax weyn ma ahayn maadaama ay ahayd uun duulimaad aad u gaaban, laakiin waxay ku ammaanaan doonaan 5,000 oo mayl -duuleed oo soo noqnoqda ah “dhib la’aan”.
Mudane nin magaciisu yahay “Chris” ayaa la hadlay eTurboNews daabacaadda Juergen Steinmetz. Wuxuu yiri, inuu ahaa ku -xigeenka Amniga Shirkadaha ee Air Wisconsin. Wuu qiray dhacdadaas wuxuuna raaligelin ka bixiyay. Wuxuu ballanqaaday inuu dib ugu laaban doono eTN isagoo leh faahfaahin dheeraad ah. Ma aysan dhicin, laakiin taa badalkeeda Air Wisconsin waxay dirtay iimayl aan lahayn magac xiriir ama saxiix.
Ku saabsan waayo -aragnimadaadii ugu dambaysay ee duulimaadka 3742 oo adeeg ka timid Chicago ilaa Milwaukee. Nabadgelyadu waa mudnaanta koowaad ee Air Wisconsin.
Diyaaraddu waxay buuxisay shuruudihii karti -u -lahaanshaha hawada ee FAA shaqaalaheenna, iyagoo la tashanaya khubarada dayactirka, waxay xaqiijiyeen in duulimaadku ammaan u yahay inuu shaqeeyo. Waxaan kaa raaligalinaynaa wax kasta oo dhib ah oo aad kala kulantay duulimaadkaaga waana ku mahadsan tahay sidaad arrintan noogu soo gudbisay.
Juergen Steinmetz wuxuu leeyahay,
Oktoobar 10, 2021 at 03: 27
Kaliya si loo caddeeyo faallooyinkaaga.
Adeegga macmiilka ee United Airlines 1K ayaa ii sheegay wicitaan labaad oo dabagal ah inay i magdhabeen 5K mayl. Waxaan ku jawaabay ma ahayn magdhaw ka dib ee waa sharraxaad waxaanan doonayay inaan arko in UA ay dabagal ku hayso rakaabkii saarnaa.
Marwada ka timid macaamiisha 1 K ee wicitaankan la duubay ayaa sheegtay in tani ay tahay uun duulimaad gaaban oo aan magdhow dambe la oggolaan karin gebi ahaanba iska indho -tirida walaacdayda.
Waxaan weydiiyay dadka xiriirka warbaahinta si ay iigu soo jawaabaan. Ka dib 5 iimayl oo dabagal ah jawaabta kaliya ee la helay waxay ahayd tii la daabacay oo ka timid hawada Wisconsin.
Waxaan la hadlay Chris VP ee amniga laga
Air Wisconsin oo arrinta ka war hayey oo ballanqaaday inuu igu soo laaban doono - weligiis ma samayn.
L. Lazuli wuxuu leeyahay,
Oktoobar 10, 2021 at 01: 49
Aad bay u badan tahay halkan si loogu waco BS. J. Ma aha diyaarad ama shaqaale United ah, waxay ahayd diyaarad rakaab ah. B. Haddii dayactirku uga digay Kabtanka sababta aan warbixin qoraal ah looga helin nidaamka jaban? C. Waxaan aad uga shakisanahay qof kasta oo ka tirsan maamulka United inuu waligiis la hadli doono saxaafada isagoo leh tani wax weyn ma aha maaddaama ay ahayd duulimaad gaaban. Sheeko walba laba dhinac baa jira kanna godad baa ka buuxa.